Samsung dia efa miasa amin'ny Galaxy Watch Sport | Androidsis
El Galaxy Watch natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny volana aogositra lasa teo ny tanan'ny Galaxy Note 9, ny smartwatch kintana an'i Samsung izay eo ambanin'ny elo an'ny marika Galaxy, miaraka amin'ny Gear Sport no smartwatch marika marika Gear farany. Araka ny tsaho farany, Samsung dia efa miasa amin'ny Galaxy Sport.
Ny anarana fototra an'ity vokatra vaovao ity dia Pulse, ny nomeraony dia SM-R500 ary ny fivoarany dia natomboka tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ny kinova rindrambaiko tafiditra dia laharana R500XXE0ARL5. Samsung no hany orinasa eny an-tsena nahavita niatrika ny Apple Watch mahery indrindra.
Ny maodelin'ny Gear Sport dia SM-R600, ka tsy mazava tsara raha ilay maodely vaovao iasan'ny Samsung, SM-R500, dia tena fanavaozana hahavoa ny tsena ho an'ny soloina ny maodely Sport teo aloha amin'ny anarana hoe Gear.
Samsung dia mety nanapa-kevitra ny hihemotra amin'ny fanisana ny smartwatches ankehitriny fa nampiditra azy ireo tao anatin'ny marika Galaxy, saingy tsy azontsika antoka satria ny isa maodelin'ny Galaxy Watch dia SM-R8XX, raha ny Gear S3 kosa SM-7XX.
Mikasika ny masontsivana, ny Galaxy Sport dia afaka tantanan'ny 4 GB fitehirizana anatiny sy dia hotantanan'i Tizen, toy ny Gears rehetra natomboky ny orinasa, nefa tsy nanakaiky ny Wear OS mihitsy.
Ity maodely ity dia ho an'ny atleta ary hahatratra ny tsena miaraka amin'ny LTE hafa. Samsung dia toa manolotra ihany koa maodely roa samy hafa amin'ity kinova ity, zavatra izay tsy natolony tamin'ny Samsung Gear Sport.
Mikasika ny daty fampisehoana dia azo inoana fa ity taranaka vaovao ity Tsy nahita ilay mazava aho raha tsy tamin'ny Aogositra tamin'ny taona ho avy, manitatra ny androm-piainan'ny taranaka ankehitriny amin'ny herintaona, toy ny fanaon'ny orinasa mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Samsung dia efa miasa amin'ny Galaxy Watch Sport
Manomboka mahatratra ny Galaxy S9 any Eropa ny Android Pie
Tafavoaka velona amin'ny fitsambikinana mba tsy ho voatafika ao amin'ny Road Survivor